﻿ सावधान ! भुलेर पनि उभिएर पानी नपिउनुहोस्
सावधान ! भुलेर पनि उभिएर पानी नपिउनुहोस्
हाम्रो शरिरलाई स्वस्थ राख्न नियमित पानी पिउनु जरुरी छ । हामिले शरिरलाई फिट राख्न पानी पिइराख्नुपर्छ । डाक्टरहरुले पनि पानी प्रशस्त पिउन सल्लाह दिन्छन् । तर पानी कसरी पिउने भन्ने बारे सल्लाह नदिन सक्छन् ।
हामिले पानी पिउदा उभिएर पिउने गर्छौ । तर पानी पिउदा उभिएर पिउनु राम्रो मानिदैन । तपाईको पनि उभिएर पानी पिउने बानी छ भने बिचार गर्नुहोस् स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
यसरी पानी पिएमा विभिन्न रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ । उभिएर पानी पिउने गरेमा पेटमा असर पर्ने गर्छ । उभिएर पानी पिउदा पाचन प्रक्रियामा पनि असर पर्छ । यसरी पानी पिउदा मुटुमा पनि समस्या देखा पर्छ । उभिएर पानी पिउदा जोर्नीको समस्या पनि हुन सक्छ ।
यसरी पानी पिउदा शरीरका तरल पदार्थहरुको सन्तुलन बिगार्छ र जोर्नीमा आवश्यक तरल पदार्थको कमी गराउने गर्छ । उभिएर पानी पिउदा पानी तेजीका साथ किड्नीले छान्न नपाउँदै भित्र पस्ने गर्छ । जसले पिसाब थैली र रगतमा विकार जम्मा भई विभिन्न रोगहरु लाग्छ ।